अनुहारमा आएको कालो पोतो कसरी हटाउने ? – Mission
अनुहारमा आएको कालो पोतो कसरी हटाउने ?
४) खुल्ला घाममा हिँड्दा घाममा हुने पराबैजनी किरणमा आउने विकिरणका कारण छालाका कोषमा गडबडी आई कालोपोतो देखिन्छ । घामको विकिरणको मात्रा बढी भई छालामा गडबडी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बढी गर्मीबाट बच्ने तथा सनस्क्रीन क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, धेरैपटक मुख धुने गर्दा छाला बिग्रन पाउँदैन ।
कालोपोतो उपचार पछि कतिपयलाई आइरहने भएकाले उच्च किसिमको उपचार तथा सल्लाह आवश्यक पर्दछ । उपचारका क्रममा विभिन्न किसिमका छाला चम्काउने वा कालो भएका भागलाई छोप्ने क्रिम पाइन्छन् । कालोपोतो फाल्ने भनेर बनाएका औषधि पनि पाइन्छन् । यस्ता औषधि लगाउँदा २१ दिन अर्थात् तीन हप्ताभन्दा बढी नियमित नलगाउने यसपछि त्यसको फाइदा तथा बेफाइदा हेरेर सल्लाहअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, अशोज २५, २०७४ 11:01:35 AM |
Posted in Flash news, Slider, मनोरञ्जन, समसामयिक, स्वास्थ्य
Prevकपालले आकर्षण मात्र होईन तपाईंको व्यक्तित्व पनि झल्काउँछ, कपाल सम्वन्धी रोचक जानकारी
Nextस्वास्थ्य बिमा विधेयक पारित